Izindaba - I-Satin iyindwangu, ebizwa nangokuthi i-sateen.
Kunezinhlobo eziningi ze-satin, ezingahlukaniswa zibe i-warp satin ne-weft satin; Ngokwenani lemijikelezo yezicubu, ingabuye ihlukaniswe ngama-satin amahlanu, ama-satin ayisikhombisa nama-satin ayisishiyagalombili; Ngokusho kwe-jacquard noma cha, ingahlukaniswa ibe yi-satin ecacile nedamaski.
I-Plain Satin ivamise ukuba nama-warp satin ayisishiyagalombili noma amahlanu, njenge-suk satin. Kunezinhlobo ezintathu zedamaski: ungqimba olulodwa, i-double weft kanye ne-multiple weft. Idamaski elinongqimba olulodwa livame ukwenziwa ngezingcezu eziyisishiyagalombili ze-satin noma lishintshwe kancane kusuka ezimbalini ezimnyama, njengedamaski elikhathele lembali nedamaski elibanzi lembali; I-Weft double damask ingaba nemibala emibili noma emithathu, kodwa imibala inhle futhi iyavumelana, njenge-flower soft damask kanye ne-Klee damask; I-Weft multiple damask inemibala emihle namaphethini ayinkimbinkimbi, angaphinde abizwe ngokuthi i-brocade, njengengubo yetafula enemibala eminingi ene-weft triple weave brocade kanye ne-weft quadruple weave. I-double weft damask inama-warp damask angaphezu kwayisishiyagalombili njengenhlangano engaphansi, futhi ingxenye yembali ingasebenzisa amadamaski we-weft ayi-16 no-24. Ngokusho kwamarekhodi ezincwadi kanye nokutholwa kwemivubukulo, kunezinhlobo eziningi zezindwangu ze-satin zendabuko e-China, njenge-satin ethambile, i-crepe satin, i-jiuxia satin, i-mulberry satin, i-antique satin, njll.
I-satin ethambile ihlukaniswe yaba i-satin ethambile engenalutho, i-flower soft satin kanye ne-viscose kasilika ethambile ye-satin. I-satin ethambile engenalutho iwuhlobo lomkhiqizo kasilika olulukwe ngesilika wangempela nemicu ye-viscose. Imikhiqizo elukiwe eluhlaza i-Flat warp kanye ne-weft, futhi imicu ye-warp ne-weft ayisontiwe. Ngokuvamile zilukwe nge-warp satin weave eyisishiyagalombili.
I-satin ethambile engenalutho ngokuvamile ingaphambili kwendwangu njenge-warp, futhi i-fiber enamathelayo icwiliswa ngemuva kwendwangu njenge-weft. Inokukhanya okungokwemvelo kakhulu embonweni, ukuthinta okubushelelezi futhi okuthambile, ukudonsa kahle futhi akukho nomuzwa onzima. Phakathi kwezinhlobonhlobo ezihlukahlukene zikasilika wangempela, ukugqokwa kuhle kakhulu. Ayinayo nje kuphela inzuzo yokumelana nemibimbi yezindwangu ze-satin ephindwe kabili, kodwa futhi inezici zokushelela nokuthambile kwezindwangu ze-satin.
I-flower satin ethambile iyingxube kasilika ne-viscose filaments. Uma kuqhathaniswa ne-satin ethambile engenalutho, umehluko omkhulu phakathi kokwelukwa kwezimbali nokuluka nje. I-Jacquard satin ethambile iyindwangu kasilika ye-jacquard enosilika we-weft, okungukuthi i-jacquard enamathelayo ye-filament kanye ne-warp satin njengenhlangano yomhlabathi. Njengosilika oluhlaza, indwangu ngemva kokukhuhla nokudaya ibonisa amaphethini amahle kakhulu agqamile futhi amahle, amahle kakhulu.
Izimbali ezithambile ze-satin zisekelwe kakhulu ezimbalini zemvelo ezifana ne-peony, rose ne-chrysanthemum
Kufanelekile ukusebenzisa amaphethini amakhulu aqinile, futhi amaphethini amancane ahlakazekile angafaniswa nezinhlobo eziminyene.
Isitayela sephethini sibonisa ukuthi umhlabathi ucacile futhi izimbali ziqhakazile, ziphilile futhi zinempilo. Ngokuvamile isetshenziswa njengendwangu ye-cheongsam, ingubo yakusihlwa, ingubo yokugqoka, ijakhethi ehlanganiswe ukotini, ingubo yezingane nejazi.
I-Viscose silk soft satin iyi-Flat warp ne-flat weft indwangu eluhlaza enosilika we-viscose kokubili ku-warp kanye ne-weft. Ukwakheka kwayo ngokuyisisekelo kufana nalezi zinhlobo ezimbili ezingenhla, kodwa ukubukeka kwayo nokuzizwa kwayo kuphansi kakhulu.
I-Crepe satin ingeyemikhiqizo kasilika eluhlaza. Isebenzisa i-satin weave, i-Flat warp kanye ne-crepe weft, kanti i-warp iyinhlanganisela kasilika amabili eluhlaza. Kusetshenziswa intambo eqinile yokusonta kasilika ongahluziwe amathathu, kanti i-weft ilukwa ngendlela yokusonta okubili kwesobunxele kanye nokubili kwesokudla ngesikhathi ishutheka. Isici esikhulu kunazo zonke se-crepe satin ukuthi izinhlangothi ezimbili zendwangu zihluke kakhulu ngokubukeka. uhlangothi olulodwa
I-wap engasontekile, ibushelelezi kakhulu futhi ikhanya; Ngakolunye uhlangothi, ukucwebezela kwe-reinforced twist kufiphele, futhi kunemigqa emincane ye-crepe ngemva kokuzijwayeza nokudaya.
I-Crepe satin ihlukaniswe yaba i-plain crepe satin ne-flower crepe satin. Ikakhulukazi umehluko phakathi kokwaluka okusobala kanye nokwelukwa kwezimbali. Ifanele zonke izinhlobo zezingubo zabesifazane zasehlobo. Iwuhlobo oludumile oludayiswa kakhulu.
Njenge-Liuxang crepe, i-jiuxia satin nayo ingumkhiqizo wendabuko onezici zezwe. Ingekawo wonke usilika we-jacquard oluhlaza olukiwe one-Flat warp kanye ne-crepe weft. I-ground weave ithatha i-weft satin noma i-weft twill, futhi indwangu ngemva kokukhuhla nokudaywa iba ne-crepe kanye nokucwebezela okumnyama; Ingxenye yembali ithatha i-warp satin. Ngenxa yokuthi i-warp ayisontekile, iphethini ikhanya ngokukhethekile. I-Jiuxia Satin inomzimba othambile, amaphethini akhanyayo nombala ogqamile. Isetshenziselwa ikakhulukazi
Usilika wezingubo zezinhlanga ezincane. I-Mulberry satin iyindwangu kasilika evamile. Ukuthungwa kwe-satin kucacile, kwakudala futhi kuhloniphekile kakhulu. I-Mulberry satin ivame ukusetshenziselwa izindwangu zendwangu yasekhaya, njengokulala, futhi ingasetshenziswa njengezindwangu zemfashini eziphezulu.
I-Mulberry Satin ingeyendwangu kasilika ye-jacquard. Kubhekiselwa endleleni yokweluka yokucwila kanye nentambo ye-wap entantayo noma intambo esontekile ebusweni bendwangu kasilika ngokwezidingo ezijwayelekile noma izinguquko ezishiyanayo ukuze zakhe amaphethini noma amaphethini. Iphethini ye-jacquard ingabonisa kangcono umuzwa wobuhle bendwangu kasilika.
I-Mulberry Satin inamaphethini nezinhlobonhlobo eziningi, futhi inqubo yokukhiqiza iyinkimbinkimbi. I-Warp ne-weft zihlanganiswa zibe amaphethini ahlukene, ngokubala okuphezulu, ukuminyana okuphezulu, ukusonteka, i-concave convex, ukuthungwa okuthambile, okubucayi nokushelelayo, nokucwebezela okuhle. Iphethini yendwangu ye-jacquard inkulu futhi inhle, inezendlalelo ezicacile, umuzwa oqinile wezinhlangothi ezintathu, umklamo wenoveli, isitayela esiyingqayizivele, umuzwa othambile, imfashini ephanayo, ebonisa isimo sengqondo esihle nesihloniphekile.
I-antique satin nayo iyindwangu kasilika yendabuko e-China, edume njenge-brocade. Amaphethini ikakhulukazi ama-pavilions, amapulatifomu, izakhiwo, ama-pavilions, izinambuzane, izimbali, izinyoni nezindaba zezinhlamvu, ezinesitayela esilula sombala.
Isakhiwo senhlangano se-antique satin samukela inhlangano ye-weft kathathu, futhi i-armor weft ne-warp zihlanganiswa ngokuvumelana namaphethini ayisishiyagalombili e-Satin,
I-B-weft, i-c-weft ne-warp zenziwe ngamaphethini we-Satin angu-16 noma angu-24. I-C-weft ingaba nombala ngokuvumelana nezidingo zamaphethini, ngakho-ke isakhiwo sayo senhlangano sihluke kancane kune-brocade. Umuzwa wendwangu mncane kune-brocade. Isebenzisa ubuchwepheshe bokuluka obuvuthiwe futhi inqubo iyinkimbinkimbi. Imikhiqizo eqediwe isetshenziswa ngokuyinhloko njengezinto zokuhlobisa.
I-brocade yasendulo iyindawo ekhethekile yase-Hangzhou. Kuyindwangu ephekiwe ye-jacquard ehlanganiswe ne-warp kasilika yangempela kanye ne-rayon weft ekhanyayo. Ingenye yezinhlobonhlobo ezitholakala ekwalukeni kwe-brocade. Itimu ithi ama-pavilions, amapulatifomu, izakhiwo, ama-pavilions, njll. iqanjwe ngenxa yombala wayo olula kanye nokunambitheka kwakudala. I-antique satin iyinhlobonhlobo emele usilika eChina. Kuyindwangu ye-weft ye-weave ehlanganiswe neqembu le-warp kanye namaqembu amathathu we-weft. Ama-weft amabili kanye ne-warp ka-a no-B alukwa abe ama-warp satin ayisishiyagalombili. Ngenxa yokuthi iyanwebeka, iqinile kodwa ayiqinile, ithambile kodwa ayikhathali, iyindwangu ekahle ye-satin nosilika wokuhlobisa wezingubo zangaphansi zabesifazane.